Maninona ianao no tsy tokony hanandrana fitsaboana amin'ny mpivady amin'ny mpitsabo mpanampy - Mpanararaotra
Raha efa nifanerasera tamina mpifankatia (na fanambadiana) tamina mpitaiza ianao, dia tsy isalasalana fa fantatrao tsara ny fahavoazana lehibe mety haterak'izy ireo. Izy ireo dia maloto indrindra rehefa ampiarahina amin'ny empaths, satria mampivelatra tena tsy salama izy ireo fiankinan-doha , fa na dia ny fifandraisana antonony amin'ny narc aza dia mety hiteraka olana feno amin'ny fahatokisan-tena, fahaketrahana, fanahiana , ary ratsy kokoa.
Ny olona sasany - izany hoe ireo izay resy lahatra ny tenany fa tia ny sakaizany ary te hiezaka ny hanao zavatra hiara-miasa amin'izy ireo - dia mihevitra fa ny fanatrehana ireo mpivady miaraka amin'ny fifampiresahana dia hanatsara ny toe-javatra.
Mino izy ireo fa raha afaka mandresy lahatra ny narc amin'ny fiainany izy ireo hitady fitsaboana miaraka amin'izy ireo, dia ho lasa mpiara-miasa tonga lafatra izy ireo izay azon'izy ireo atao.
Tsia, tsy hitranga izany, ary mety hiafara amin'ny fahatsapana ho ratsy lavitra ianao aorian'ny fotoam-pitsaboana na dimy noho ny nataonao talohan'ny nanandramanao azy akory. Izao no antony.
Lalao ho azy ireo izany
Raha tsy mbola tsikaritrareo dia biby mahasarika i narcissists ary tompon'ny fanodikodinana . Raha nanaiky ny handeha hiaraka aminao izy ireo, dia satria mampihomehy azy ireo izany.
Miara-milalao aminao toy ny kilalao saka misy totozy ry zareo, avelany handeha malalaka alohan'ny hamelezana azy, avy eo averimberiny mandritra ny fotoana fohy: manome ny totozy (ianao) manantena fa hihatsara ny zava-drehetra alohan'ny hanapotehana ireo fanantenana voalaza indray. Miaraka amin'ny baoliny.
Tadidinao ny fomba nandokafan'izy ireo anao tamin'ny fiandohan'ny fiarahanareo? Ahoana ny fahasarotanao tamin'ny fitondran-tenany? Eny, ny mpitsabo koa dia olona, ​​ary tsy afaka mahita mandrakariva amin'ny alàlan'ny teti-dratsy ataon'ny mpitsabo mpanampy.
Izay rehetra entinao dia hivadika hanohitra anao satria ny narc amin'ny fiainanao dia manandrana mampiseho an'io mpitsabo io fa mahatsiravina ianao. Na inona na inona nolazainao na hoe manandrana fatratra hahamarina ny zavatra niainanao sy ny fihetseham-ponao ianao, dia avadik'ilay narc izany ka izy ireo no iharan'izany, ary mila fanafody ianao hampitsaharana ny fihetsika 'adala', na omenao manandrama ary miverena amin'ny fiainanao, mitazona ny toe-java-misy.
Na izany na tsy izany dia mandresy izy ireo.
Gaslighting Miaraka amin'ny fanampian'ny The Therapist
Ny zavatra iray mahazatra izay mitranga rehefa tarihina amin'ny fitsaboana ho an'ny mpivady ny narc dia (araka ny tondroina etsy ambony) dia lasa mahazo ny mpitsabo eo anilany izy ireo ary mifanohitra aminao.
Hiezaka mafy ianao hampahafantatra ilay mpitsabo ny fomba fijerinao sy hanazava hoe manao ahoana ny vadinao ao an-trano, ary nilaza izy fa ny olon-droa dia ho malahelo sy haratra, ary handraraka ny fony ny amin'ny habibiana sy ny tsy rariny ataon'izy ireo amin'izy ireo, ary ny fomba fanaovanao mitantara tantara handratra azy ireo, ary miezaha hisarika ny saina na hiantra ny hadisoanao.
Alao an-tsaina ny fomba fijerin'ny scenario ny mpitsabo anao: any ianao, tsy misaina ary manika ary mety akaiky ny hysterika, mivavaka mba hisy hihaino anao amin'ny farany ary hino anao momba ny fanararaotana rehetra nihatra taminao, ary ny mpiara-miasa aminao. toa malahelo sy kivy.
Mety manana PTSD ianao ary mety ho very ny anjaranao mandritra ny fotoam-pivoriana satria eo am-pamaranana ny tadinao ianao, fa tsy ny hahatonga anao ho toa marina kokoa sy mila fanampiana, ny fihetsika mamoy fo dia handoko anao ho tsy milamina mpanao an'ity fiaraha-miasa tsy salama ity.
Ny mpitsabo dia hanome tsiny anao noho ny fitondran-tenanao TSY MAINTSY, ary hanontany anao ny antony mahatonga anao tsy mahay mandanjalanja amin'ny olona iray izay miharihary fa tena mitady izay hahasoa anao indrindra, ary mandratra amin'ireo fiampangana tsy ara-drariny nataonao.
Ratsy kokoa noho ny tsy inoan'ny olona iray izay nosokafanao dia manala baraka azy ireo, indrindra rehefa ianao no nijaly tamin'ny tanan'ny mpanararaotra. Izany dia mety hiteraka fahasimbana maharitra lavitra kokoa, raha ny mpiara-miasa amin'ny narc mitsiky fotsiny satria malemy sy malahelo be ianao ka tsy afaka manao fitsaboana marina akory.
sam smith sy ed sheeran
Ny fanaovana ny marina marina dia mety hampidi-doza
Raha ny vady aman-janaka mahadomelina anao dia nanao teny am-bava, ara-pihetseham-po ary / na fanararaotana ara-batana taminao tao an-trano, dia azo inoana fa nangina fotsiny ianao noho izany noho ny tahotra.
Ny fitsaboana miaraka amin'ny vadinao dia mety hahatonga anao hahatsapa ho manana toerana azo antoka hanokafana ireo fanararaotana toy izany satria misy olona iray izay hino anao sy hiaro anao… fa raha tsy miara-mipetraka ianao sy ny olon-tianao dia mandeha ianao mila miverina mody miaraka amin'izy ireo aorian'ny fotoanan'ny torohevitra, ary mety hisy ny helo tsy maintsy aloa.
Ataovy ao an-tsaina fa ireo mpihinana zava-mahadomelina dia manao tsinontsinona ny fandokoana azy ireo ho 'ratsy' ny fisiany manontolo dia mihodinkodina amin'ny fankasitrahana sy fankafizana, noho izany raha madio ianao amin'ny fitondran-tenany mahatsiravina sy ny lafiny mpitsabo miaraka aminao fa tsy izy ireo, dia tsy isalasalana fa hozakainao ny vokatry ny fandrehany tezitra raha vantany vao mikatona ao aorianao ny varavarana fidinao.
Mety hitombo mihoatra ny noeritreretinao ny hatezeran'izy ireo, ary raha tokony hanaratsy olona fotsiny ianao dia mety hiafara amin'ny herisetra ara-batana (na fandrahonana amin'izany). Na ireo mpiara-miasa narc izay tsy nanararaotra taloha aza dia mety ho lasa mahery setra sy mahery setra kokoa raha mahatsapa fa tafahoatra ny marika ianao ary sahy mampino ny hafa zavatra mahatsiravina momba azy ireo.
Vola maranitra 5 ampiasain'ny mpahay rongony hamerenany anao foana
Inona no ataon'ny rajako manidina ho an'ny mpitsabo (sy ny fomba fanafoanana azy ireo)
Tsy hisy hiova
Teknika iray hampiasain'ny mpampihorohoro raha manaiky ny fahazoana fitsaboana izy ireo dia ny mody manohana sy mandray ny torohevitr'ilay mpitsabo. Mety haneho fanenenana 'tena izy' izy ireo, hamorona tantara vitsivitsy momba ny fahazazan'izy ireo nandritra ny vanim-potoana nahafinaritra mba hahazoana fiaraha-miory avy aminao sy ilay mpitsabo, ary toa tena nanolo-tena hanatsara ny zavatra eo aminao izy ireo.
Ary ity koa dia misy ny vokany amin'ny famelana anao hanana fahatsapana fandriam-pahalemana diso. Mety handroso izy ireo ary hiova ho tsara kokoa (mandritra ny fotoana fohy), hanome anao ny fahatsapana fa tena maniry ny hiova izy ireo ho mpiara-miombon'antoka mendrika anao ho olona tsara kokoa ho anao sy ho an'ny tenany…
… Ary raha vantany vao mamela ny mpiambina anao ianao ary manomboka matoky azy ireo indray, na dia kely aza, dia hilatsaka io façade io ary hiverina amin'ny fombany manokana izy ireo.
Fa nahoana izany? Satria tsy afaka manova ny maha izy azy mihoatra ny azonao izy ireo.
Tsy afaka miova amin'ny fomba majika amin'ny mpiara-miasa tonga lafatra toa ny chameleon ianao izay hiova sy hikororosy ho tonga vady sahaza azy isaky ny miova ny filan'izy ireo, ary tsy afaka ny ho tonga mpiara-miasa azo antoka sy azo itokisana izay tena tia anao izy ireo.
Miaraka amin'ny mpampinono, misy ianao hahasoa azy ireo, amin'ny fotoana mahamety azy, ary hanandrana manodinkodina anao amin'ny lafiny rehetra izy ireo mba hahazoana izay tadiaviny. Tafiditra ao anatin'izany ny filalaovana ny lalao fitsaboana raha toa ka mahatonga anao ho mora tohina amin'ny farany.
Tandremo ny tenanao, Voalohany indrindra
Sarobidy tokoa ny fitsaboana. Tena izany tokoa. Tsy misy na iza na iza aminay tsy misy olana, ary raha tafita velona tamin'ny fiaraha-miasa maharitra ianao izay nahatonga anao simba sy kivy, dia ho tombontsoanao indrindra ny mitady mpitsabo mahay sy matanjaka izay azonao atokisana.
Rehefa mandeha ny fotoana dia afaka manampy anao amin'ny famerenanao ny fahatokisanao tena sy ny fitehirizana tanjakao manokana izy ireo ary hiasa mankany amin'ny fiainana mendrika anao.
Ny lakileny eto dia anao mitady io fitsaboana io irery .
Mila manao ny tenanao ho laharam-pahamehana ianao ary mifantoka amin'ny fahasalamanao sy ny fahasambaranao manokana. Ny ankamaroantsika dia efa voarindra mba handinihana izany ho tia tena, fa tena resaka fitehirizana tena sy fikolokoloana tena. Mitadiava mpitsabo manana traikefa amin'ireo olona manana PTSD fanararaotana narcissistic , ary manolo-tena hamela azy ireo hanampy anao handamina ny fiainanao.
Raha resaka fifandraisana amam-pitiavana amin'ny mpifoka rongony dia tena misy hetsika tokana azonao atao mba hiantohana ny fiainanao amin'ny ho avy: mandosira, ary manipy grenady eo an-tsorokao mba tsy hahafahan'izy ireo manaraka anao.
ahoana no hianaranao matoky olona
mianatra miaina amin'ny fotoana
ny fomba fampiononana ny namanao aorian'ny fisarahana
Ahoana no milaza olona iray tahaka azy ireo ny lahatsoratra
ray aman-dreny mifehy ny fiainako amin'ny 25
tsy matoky ahy tsy misy antony ny sipako
ny fomba hanehoana firaiketam-po amin'ny fifandraisana